हरिवंशको यो खुबीलाई कुन शब्दले बयान गर्ने? हेर्नुस् हसाएरै दर्शक ढलाए -भिडियो हेर्नुस् – rastriyakhabar.com
काठमाडौँ । चैत्र ९ गतेदेखि देशव्यापी प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको बहु प्रतिक्षित चलचित्र ‘शत्रु गते’ को निर्माण समूह देश दौडाहामा लागेको छ । चलचित्रको प्रसार प्रसार गर्ने उद्देश्यले चलचित्रको निर्माण टिम तथा कलाकारको टोली देश दोडाहामा निस्कीएको हो।
निर्माण टिमले फागुन २३ गते हेटौडा, २४ गते नारायणघाट, २५ गते बुटवलमा कार्यकम सम्पन्न गरीसकेको छ. यसैक्रममा आज २६ गते पोखरामा आफ्नो प्रचार सहितको कार्यकम सम्पन्न गरेको छ।
पोखरामा कलाकारहरु किरण केसी,शिबहरि पौडेल,पल शाह,आचल शर्मा,दिपाश्री निरौला लगायतका कलाकारको उपस्थिती सहित प्रस्तुति पनि राखेका थिए. यसै कार्यकममा दिपाश्री निरौला र हरिवंश आचार्यको रमाइलो हास्य प्रस्तुतमा धेरै दर्शक पेट मिचीमिची हासेका थिए।